ဂျာနယ်: J-Lo "Hustlers" အတွက် glitzy ပြပွဲခိုးယူ - လူတွေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: J-Lo အတွက် glitzy ပြပွဲခိုးယူ" Hustlers "- လူတွေ
Lindsey Bahr | AP သတင်းဌာန
"Hustlers" အဆုံးအားလုံးကိုသူ့ရဲ့လှည့်ကွက်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဒါဟာလည်းအနည်းငယ်ဇာတ်ကားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်စီမံခန့်ခွဲတစ်ခုခုရုပ်ရှင်၏အဆုံးသတ်သည်။ အဆိုပါစိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်လောင်းကြေး, ဇာတ်ကောင်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အဆိုပါအဘယ်ကြောင့်အပေါင်းတို့၏တစ်ချိန်တည်းအကြောင်းကိုမှာနှိပ်ပါ။ ဤသည်ကိုသင်စဉ်းစား, ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အရာအားလုံးတိုးတက်စေရန်စတင်သောအခါထို့နောက်ရုတ်တရက်သူကကိုယ့်ကိုကျော်ပါပဲ။
ထို့နောက်သည်အထိ "Hustlers" သူတို့မြို့ရိုးအလမ်းကိုပုံမှန်အပေါ်စီးပွားရေးကျဆင်းမှု၏သက်ရောက်မှုကိုမကျေနပ်သောကြောင့်အဘယ်သူသည်နယူးယောက်မြို့ကနေ Stripper ၏အုပ်စုတစု၏ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုပြောပြစက်ဝိုင်းထဲမှာလှည့်ပတ်အပြေးကပါဝငျတဲ့ con စတင် သူတို့ရဲ့အချမ်းသာဆုံးအမှတ်တံဆိပ် drugging နှင့်မတန်တဆခရက်ဒစ်ကဒ်ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်ဖို့။ အဆိုပါစာရေးဆရာနှင့်ဒါရိုက်တာ Lorene Scafaria နယူးယောက်မဂ္ဂဇင်းအတွက်ပေးနေတာအကြောင်းကိုဂျက်စီကာ Pressler များ၏မသိမသာကွဲပြားနှင့်ထှနျးပုံပြင်အဆင်ပြေအောင်
။ Ramona ၏ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ကောင်းနည်းပညာပိုင်းဒုတိယဦးဆောင်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ပျားရည်အသံနဲ့ချွန်ထက်ရုပ်ရှင်မှစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသူသည်သင်တို့ကိုပင်အခြားမည်သူမဆိုပင်ကြိုးစားနေစိတ်ကူးမနိုင်, သင်မလိုချင်မယ်လို့အနည်းကိန်းစွမ်းဆောင်ရည်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်၎င်း၏အထင်ကြီး striptease မှတဆင့်ဝင်စီးပြီးနှင့် Fiona Apple က "ပြစ်မှုဆိုင်ရာ" ဟုအဆိုပါရုပ်ရှင်အပေါ်တိုးချဲ့။ အားလုံးမျက်စိနှင့်ဒေါ်လာအခန်းထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်, ကင်မရာနှင့်ပရိသတ်ကိုအပေါ်သူ၏ချုပ်ကိုင်ဘာမျှမသွားကြကုန်အံ့။ ဒီဣတ္ကြည့်တကယ်ပဲအထူးအရာတစ်ခုခုသည်နှင့်တူပြီးမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါ။ အမျိုးသမီးများနေ့ဖြစ်ကောင်းတစ်ဝက်အဝတ်အချည်းစည်းသော်လည်း, အဲဒါကိုတစ်ဦးအချက်ကိုရဲ့အခမဲ့ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ Ramona ဒေါ်ရသီ (ဇာတ်စင်နာမကိုအမှီ Destiny) Cardi B နဲ့ Lizzo အခြားသိပ်ပြီးအတူကစားရန် likes ရှိရာကလပ်အတွက်အသစ်သောမိန်းကလေးတစ်ဦးသောသူသည် Constance ဝူကဤလောကသို့ကြိုဆိုနေကြသည်။ သူမသည် Ramona နှင့် Ramona သူတို့ညစဉ်ညတိုင်းတွေ့ဆုံရန်ယောက်ျားအမျိုးမျိုးမှအယူခံဖို့ဘယ်လိုနှင့် ပတ်သက်. မိမိအက de facto ဆရာဖြစ်လာသည်ကိုသိသောအရာကိုသိရန်လိုသည်။ မကြာခင်မှာပဲဒေါ်ရသီ / Destiny ဟာနှလုံးခွဲစိတ်ဆရာဝန်သလောက်ပိုက်ဆံရဘာမျှမဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်အဖြစ်ဖြုန်းဖို့ပါရှိပါသည်။ အားလုံးကြောင်းပိုက်ဆံနှင့်အတူသူမကြွေးမြီသို့သူမ၏အဖွားကူညီပေးသည်, ဒါပေမယ့်လည်းကြီးမားတဲ့အိတ် Gucci, Versace swimsuit နှင့် (ဒေါ်လာဥပဒေကြမ်းများနှင့်အတူအများအားဖြင့်ပျော်စရာနှင့်အတူ,) တစ်တောင်တက်ဝယ်ယူခဲ့သည်။
"အရာအားလုံးဒါအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေနှင့်အေးမြခဲ့ပါတယ်" ဟုသူမကဂျူလီယာ Stiles နေဖြင့်ကစားနေတဲ့သတင်းထောက်အားမိမိပုံပြင်ပြောပြကပြောသည်။ သို့သော်ထိုသို့ 2007 ၌ရှိ၏နှင့်မကြာမီစီးပွားရေးကျဆင်းမှုထိခိုက်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များပြုန်းမည်ဖြစ်သည်။
ကြှနျုပျတို့သညျဤအချက်မှာရည်မှန်းချက်ဒေါ်ရသီ / Destiny သိအားလုံးသည်ကြောင့်မည်သူမဆိုအပေါ်မူတည်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ လုံလောက်အောင်ကောင်းမွန်သော, ဒါပေမယ့် (တောင်မိန်းကလေးတစ်ဦး၏နိဒါန်းနှင့်အတူ) လုပ်ဖို့အများကြီးမပေး, သူမနှင့် Ramona နဲ့တခြားမိန်းကလေးတွေ, မာစီဒီး (Keke Palmer က) နှင့် Annabelle (Lily Reinhart) မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲဖို့စတင်ပါ, အထူးသဖြင့်လာသောအခါ နောက်ဆုံးအနေနဲ့။ ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ဆောင်းပါးများကို stylist ကိုဝတ်ဆင်ထားခဲ့။
တစ်ဦးကရုပ်ရှင်ပတ်လည် revolve ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောရှုပ်ထွေးသောကိစ္စများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မနိုင် - မကြာခဏရိုင်းစိုင်းညာဘက်လူ bravado မှန်မှန်တစ်ဦးချွတ်ကလပ်အတွက်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ depositing ။ စကားလုံးများနှင့်လုပ်ရပ်များညစဉ်ညတိုင်းကလပ်မှဤလူကိုဦးဆောင်ခြင်းနှင့်ဒါ cavalierly မြှူ intoxicating ပိုက်ဆံပစ်ချသောအတွင်းစိတ်အသက်တာ, သူတို့ကပေးဆောင်ထားသောမိန်းမတို့အားစေလွှတ်ခဲ့သည်။
"Hustlers" ဟုရော်ဘင် hood ကိုအဖြစ်သေအချာ positive ဖြစ်ပါတယ်။ လူထုကြိုက်-နှစ်ဆပိုများလာပလက်ဖောင်းကလဲ့စားချေပုံပြင်, ဒါပေမယ့်တကယ့်ကိုသူတို့နည်းလမ်းများနှင့်အတူပြန်လည်သင့်မြတ်ပါဘူး။ သူတို့ကသူတို့စီးပွားရေးလောကသားအပေါငျးဖို့အတွက် Titans တွေကနှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့ဤနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ကြောင်းရုံလုပ်နေတာဟုကတရားမျှတ။ သို့သော်ထိုအခါသူတို့သည်သွားပါနှင့်လည်းမိမိတို့၏ရည်မှန်းချက်များရည်ရွယ်ထားအားလုံးအရင်းရှင်အရင်းရှင်အညွှန်းကိန်းမှာသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံဖြုန်းနေကြတယ်။ အများဆုံး "ပျြောရှငျ" မြင်ကွင်းများတစ်ခုမှာ Ramona လက်ဆောင်တွေရှည်လည်ဆွဲ Mikimoto ပုလဲနောက်ထပ် Gucci အိတ်တစ်သားမွေးကုတ်အင်္ကျီနှင့်ခရစ်ယာန် Louboutin ဘွတ်ဖိနပ်များပါဝင်သည်ဖလှယ်ရှိရာ sumptuous တိုက်ခန်းတစ်ဦးခရစ္စမတ်ပါတီဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါရုပ်ရှင်အမျိုးသမီးတွေအကြား link ကိုနှင့် ပတ်သက်. ၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ဤမျှကာလပတ်လုံးမတိုင်မီဖြစ်ပျက်ပါဘူးတဲ့ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပုံပြင်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အဆုံးတိုင်အောင်, အဲဒါကိုခက်ခဲသူမ၏သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ထဲကအများစုဟာသနားပြီးနောက်ကြည့်ဖို့ Destiny အကြောင်းကိုဤမျှလောက်သတင်းအချက်အလက်ရရှိထားပါသည်။
အဆိုပါ "Hustlers" အနည်းငယ်ဟာသကနေအကျိုးရှိသည်ဟုလိမ့်မယ်။
2 1 /2ကြယ်များ
အကဲဖြတ်: R ကို (နေရာအနှံ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ, မူးယစ်ဆေးအကြောင်းအရာ, ဘာသာစကားနဲ့ဗလာ)
ကြာချိန်: 107 မိနစ်
အဆိုပါမှေ့ရာ Wave ကို Hybrid ကို Casper အပေးအယူမရှိဘဲနှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်ထောက်ခံမှုပေးထားပါတယ် - BGR